Home Wararka Ciidamo taabacsan Farmaajo oo gabi ahaanba la wareegay aagaga ku dhaw NISA
Ciidamo taabacsan Farmaajo oo gabi ahaanba la wareegay aagaga ku dhaw NISA
Ciidamo taabacsan Farmaajo oo gabi ahaanba la wareegay aagaga ku dhaw Xarunta Nabad Sugida. Warar xog ogaal ah ayaa sheegya in cutubyo ka tirsan cidanka NISA oo daacad u aha Taliye NISA Banaadir Col.Yaasiin Farey ay gabi ahaanba la wareegeen Jidka isku xira Xarinta Habar khadiija iyo Kodka Jilacow ilaa dhanka maanaboolyo.
Ciidanka oo ah nooca loo yaqaano Duufaan ayaa ku labisan hubka noocyadiisa kala duwan. Col.Yaasiin Farey ayaa u muuqad mid fulinya xilka la wareega Hay,adda NISA ee heer Federal ah. Waxa luna taageetsan yahay go’aanka Madaxweyne Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ee muddo xileedkiisu kadhamaaday.
Su’aasha la isweydiinaya ayaa ah RW Rooble muxuu sameeyn doonaa?
Deni oo ugu baaqay Farmaajo inuu Ra’iisal wasaaraha siiyo Fursad uu shaqadiisa ku guto
[Dhageyso] Dacwad ka dhan ah Fahad & Farmajo oo loo gudbiyay Maxkamadda ICC.
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo qarax lagula eegtay degmada Mahadaay